Kwenzeka ntoni ngomhla wokuzalwa kwakho? | Martech Zone
Kwenzeka ntoni ngomhla wokuzalwa kwakho?
NgeCawa, ngoFebruwari 25, 2007 NgeCawa, ngoSeptemba 30, 2012 Douglas Karr
Kwakukho ixesha apho ndandiba krwada xa usuku lwam lokuzalwa luzayo. Kwenzeka ntoni ngomhla wam wokuzalwa? Ngomhla we-19 ku-Epreli kuneziganeko ezithile ezinomdla ezenzeka kuyo… uqhushumbo lwe-USS Iowa, iWako, isixeko sase-Oklahoma… ugh. Ukubuyela emva kwimbali, ayibi ngcono. Yayiyimini eyaqala iMvukelo yaseMelika!
I-Wikipedia inokungena yonke imihla yonyaka onokuyifunda. Ndifuna ukongeza ukuba yayingumhla wokuzalwa kwam, kodwa andiqinisekanga ukuba yimbali ngokwenene. 😉
I-OpenID ifakiwe kwaye ikulungele!
Feb 25, 2007 ngo-4: 36 PM
Yhu… uxolo ngokuba ingakhange isebenze kwi-IE (Sisikhangeli esoyikeka ngokwenene). Ndilungise nje!
Feb 26, 2007 ngo-3: 38 PM
Kwelinye icala ndabelana nomhla wokuzalwa noChristopher Lee noVincent Price, kunye noLou Gossett Jr (ngoMeyi 27) Isixhobo esihle sokukhangela, uDoug.
Feb 26, 2007 ngo-5: 50 PM
Bekuya kuba lula kakhulu ngaphandle kokuba i-IE7 khange isilele kwixabiso kwinto ekhethiweyo. Ke le fomu iyithathile kabini loo nto.
Zintathu ezipholileyo ukwabelana nomhla wokuzalwa!
Feb 26, 2007 ngo-3: 46 PM
Kulungile-Ndabelana ngosuku lwam lokuzalwa kungekho ngaphantsi kukaCameron Diaz 🙂
(Ewe, IE is eyoyikekayo. Ndisebenze phantse iveki kulwakhiwo lwebhlog epholileyo, ndafumanisa ukuba, nangona ibithobela iXML, khange ibonelele ngokuchanekileyo kwi-IE.)
Feb 26, 2007 ngo-5: 51 PM
UCameron Diaz ubonakala ngathi yenye yeenkwenkwezi ezinentloko yakhe egxalabeni. Kwaye ushushu! 🙂
Ii-eCards zokuzalwa zasimahla
Meyi 12, 2007 kwi-4: 35 PM
Bday yam ingoJuni 21 kwaye nantsi into ethi iWikipedia:
"Olu suku luhlala luphawula i-solstice yehlobo emantla e-hemisphere kunye ne-winter solstice kumazantsi e-hemisphere, kwaye ke lolo suku lonyaka kunye neeyure ezinde zokukhanya emini kwi-hemisphere esemantla kunye neyona imfutshane kwi-hemisphere esemazantsi."